Ferrovit2Cards Of 10 Tablets Total 20 Tablets – SUNNY eSTORE
Ferrovit2Cards Of 10 Tablets Total ...
Ferrovit2Cards Of 10 Tablets Total 20 Tablets
SUNNY eSTORESKU: OT-FERRO-2-226 (S010)
2,100 Ks 2,200 Ks
Ferrovit သည် သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော သွေးအားနည်းရောဂါအား ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် Ferrous Fumarate ပါဝင်သော သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး ဖြစ်သည်။
သံဓာတ်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ဆားအားလုံးထဲတွင် Ferrous Fumarate သည် အခြေခံကျသည့်သံဓာတ် ပမာဏကို အမြင့်ဆုံးပေးသည်။
ဗီတာမင် B12 နှင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်တို့သည် သွေးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ကာလအတွင်း neural tube ချို့ယွင်းမှုကိုလည်း ဟန့်တားပေးသည်။
အရေအတွက် - ဆေးပြား ၂၀ ပြား (ဆေးပြား ၁၀ ပြားစီပါသော ဆေးကဒ် ၂ ကဒ်)
Ferrovit is an iron supplement containing Ferrous Fumarate used in treatment of iron deficiency anemia.
Among all iron salts, Ferrous Fumarate provides the optimum amount of elemental iron. Vitamin B12 and Folic Acid are essential for blood formation and help in preventing neural tube defects during pregnancy.
Includes: 20 tablets (2 cards of 10 tablets)